Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu Calgary ọhụrụ na Seattle na WestJet ugbu a
Ụgbọ elu Calgary ọhụrụ na Seattle na WestJet ugbu a.
A na-eme ememe ụgbọ elu ọhụrụ na-agafe dị ka isi ihe maka ohere akụ na ụba, njem nlegharị anya na omenala n'etiti Alberta na Pacific Northwest.
WestJet weputara ụzọ mba ụwa kachasị ọhụrụ na-ejikọ Calgary na Seattle na nke mbụ.
Ọpụpụ nke WS3612 bu ndị ọbịa 69 akara WestJet ọhụrụ ụzọ mba ụwa mbụ ọpụpụ n'okpuru amụma ịgba ọgwụ mgbochi ndị ọrụ gọọmentị Canada.
Flightgbọ elu oke oke WestJet kacha ọhụrụ ga-arụ ọrụ ugboro anọ kwa izu iji bido ma ga-abawanye ruo ugboro abụọ kwa ụbọchị site na mmiri 2022.
taa, WestJet, yana ndị isi gọọmentị na ndị mmekọ ụlọ ọrụ, wepụtara ụzọ ọhụrụ ya na-ejikọta ndị ọbịa na nke mbụ n'etiti Calgary na Seattle. Ọpụpụ nke ụgbọ elu WS3612 bụ akara mgbake dị mkpa maka WestJet dị ka mbubata mbufe ụgbọ elu nke mbụ kemgbe ọrịa butere ọrịa.
"Obi dị anyị ụtọ ịkwalite njikọta ozugbo n'etiti Calgary na Seattle nke mbụ n'ụzọ ndị ọbịa anyị na obodo abụọ ahụ cherela ogologo oge," Chris Hedlin kwuru, WestJet, Vice-President, Network and Alliances. "Ụzọ a ga-eme ka mmekọrịta akụ na ụba dị n'etiti mpaghara dị iche iche ma kpalie akụ na ụba ndị ọbịa nke Alberta ka anyị na-aga n'ihu na-ewusi netwọọdụ gafere oke site na ọdụ ụwa anyị na Calgary."
Ọpụpụ nke WS3612 bu ndị ọbịa 69 akara WestJetỤzọ ọpụpụ mba ụwa ọhụrụ mbụ n'okpuru amụma ịgba ọgwụ mgbochi ndị njem na ndị ọrụ gọọmentị nke Canada.
"Ntụkwasị obi na njem na-eto eto dị ka egosipụtara site n'ọchịchọ maka ụgbọ elu nke taa na atumatu ga-amalite iji kwado usoro gburugburu ebe obibi njem nke ịgba ọgwụ mgbochi," Hedlin gara n'ihu. "Taa bụ ihe dị mkpa dị mkpa na nkwa anyị iweghachi akụ na ụba ndị ọbịa nke Canada ma anyị nwere nchekwube na anyị ga-aga n'ihu na-ahụ ọganihu na mfe nke atumatu ókèala nke na-emetụta ikike onye ọbịa anyị nwere ịga njem n'etiti Canada na US dị ka ikuku na-enweghị nsogbu. ha nọ n’elu ala.”
Nkọwa nke ọrụ ọhụrụ WestJet n'etiti Calgary na Seattle:
Nsoro Frequency Ụbọchị mmalite
Calgary - Seattle 4x kwa izu November 4, 2021
6x kwa izu December 20, 2021
1x kwa ụbọchị March 28, 2022
2x kwa ụbọchị Nwere ike 19, 2022
Seattle - Calgary 4x kwa izu November 4, 2021